Zokiolona ao Marovoay: nahazo trano fialam-boly misy fitsaboana maimaim-poana | Région Boeny
Tany Marovoay, faritra Boeny no nosafidin’ny ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy nanatanterahina ny fanamarihana nasionaly ny andro irasam-pirenena ho an’ny Zokiolona ny sabotsy 01 oktobra 2016.
Filaharana namakivaky ny tanàna niarahan’ireo fikambanan’ny Zokiolona tao amin’ny distrikan’i Marovoay no nanokafana ity andro ity.
Tany an-toerana ny Ministry ny Mponina, Rtoa Onitiana Realy, nanome voninahitra azy ireo. Notron’ireo Loholona sy ny Solombavam-bahoaka avy ao Marovoay niaraka tamin’ny Prefen’I Mahajanga sy ny Talen’ny kabinetran’ny Faritra Boeny ary ireo Ben’ny tanàna voafidy tao an-toerana.
“Ny haja atolotra ny Zokiolona no fanoitra ho an’ny fampandrosoana lovain-jafy”. Io no loha-hevitra nosafidian’ny ministera noho ny fahatsapanay fa misy ireo zo fototra izay tokony ho azon’ireo Zokiolona mbola tsy voahaja, misy ny zavatra ilain’izy ireo tsy tanteraka. Ka izay no ezaka ho tanterahina mba ho fahendrena lovain-jafy ny fanajana azy ireo sy ny anatra atolony.
Anisan’izany ezaka izany ny fanomezana trano fialam-boly misy toeram-pitsaboana maimaim-poana ho an’ireo Zokiolona izay naorin’ny Ministeran’ny Mponina ka natolotra azy ireo tamin’io andro io. Efa misy seza 10 sy latabatra 03 ary mpitsabo miisa 04 ao amin’io toerana io. Ankoatra ireo dia nivatsy fanafody ihany koa ny Ministera mpiahy entin’ireo tompon’andraikitr’ity toeram-pitsaboana vao natolotra ity hitsaboana maimaim-poana ireo Zokiolona marary.
Teto Marovoay no nisantaran’ny Ministeran’ny Mponina izao ezaka fiahina ny Zokiolona izao, ary mbola hiparitaka manerana ny nosy ny tetik’asa araka ny toky nomen-dRtoa Ministra.
Ankoatra izay dia Zokiolona miisa 500 no notolorany fanomezana izay nahitana lamba firakotra sy ireo kojakoja ilaina andavan’andro. Vilany be fandrahoana sakafo miisa 06 kosa ho an’ireo fikambanam-behivavy, ary vehivavy bevohoka miisa 50 no notolorany lambam-pandrina.
Nofon-kena mitam-pihavanana niarahan-dRtoa Ministra sy ireo olom-panjakana rehetra tany an-toerana tamin’ireo fikambanan’ny Zokiolona no namaranana ny fotoana.